Angioedema - esingathí sina kakhulu ukuphendula nomzimba. Iqala ngokuzumayo futhi ngokushesha kakhulu ekuthuthukiseni. isikhathi kubaluleke kakhulu ukunikeza usizo lokuqala kumuntu. Futhi noma kunjalo udinga ukubiza iqembu yezokwelapha. Hlobo luni ukuvuvukala, kanjani ukuthi kuziveza, futhi kanjani ukusiza isiguli?
Iqiniso ukuthi yokungezwani komzimba kubi, wonke umuntu uyazi. It uyakwazi ukuguqula impilo yabantu esizukulwaneni yokuhlushwa. Ukunisela, ukungakhululeki njalo kule nekhala nakho konke phezu komzimba wakhe, sneezing, nezinduna encane ukuluma kwesikhumba futhi batshelwa - kaningi kubonisa ukuthi ukusabela nomzimba. Kodwa uma kuqhathaniswa ne angioedema kuyinto izimbali. Hlobo luni ukuvuvukala? Manje Ngitshele kabanzi. On ke odinga ukukwazi ukuze ube nesikhathi wena noma omunye umuntu ukusiza.
Noma yimuphi ukuphendula iguliswa akufanele ezingabanjwanga futhi abasinakanga. Kuyadingeka ikakhulukazi ukuthatha izinyathelo esiphuthumayo, uma uvele angioedema. Izimpawu zokuqala uqaphela nalowo kithi futhi ngaphandle udokotela. Ukuvuvukala ngokuzumayo futhi ngokushesha okukhulu kuvela wonke umzimba. Vele imizuzu 5-15 isiguli siqala ukuba sikhukhumale kufuthwe iyiphi ingxenye yomzimba. Iningi izimpawu edema avele ebusweni endaweni le mucosa ngomlomo, amalaka, ezithinta ipheshana zokuphefumula. Ngaphansi ngokuvamile, lokhu ukusabela iguliswa itholakala ipheshana wokugaya ukudla, endaweni zangasese. Uyazibuza ifana umuntu onhliziyo angioedema? Izimpawu (izithombe zazo kungenziwa kalula atholakala omagazini impilo) kuzokusiza ukuba bakhombise ukuthi kwenzekani. Iziguli bathi abanazo ubuhlungu ngesikhathi ukuvuvukala akuyona wazizwa. ukuzizwa kuphela ukungezwani eqinile kwesikhumba futhi ukulunywa ezingemnandi ku zangasese endaweni, amehlo, ikhala. Angioedema livela ngokuzumayo futhi ezimweni eziningi futhi singanakwa. Ngokuvamile, ngosuku isiguli ubona noluncane ukugula izolo. Kodwa ungacabangi ukuthi kulesi sifundazwe, awukwazi ukucela usizo balinde kuze ukuvuvukala kuyokwenzeka ngendlela isikhungo sokwelapha futhi ekhaya. Lokho, okungenani budedengu. imiphumela kakhulu ezingemnandi ezimweni ezithile angioedema. Izimpawu (usizo lokuqala kuleli cala kubalulekile futhi kuyadingeka) uvele ngaphambi zokuphefumula ipheshana ndawo, futhi lokhu kuvimbela ukugeleza yemvelo umoya ongena emaphashini? Kuyadingeka ukuba ushayele i-ambulense bayiswa ukufika wezokwelapha imithi anti-iguliswa. Libuye yingozi uma ukuvuvukala ebonakaliswa uhlelo urogenital. Lokhu kungaholela ukubambezeleka bemvelo umchamo okukhipha futhi ukudakwa.
Mayelana izimpawu ngaphezulu
Njengoba kushiwo ngenhla, kusenjalo bandisa ubuso nezindawo lwamafinyila zomzimba, uma iqala angioedema. Izimpawu ze- ukusabela iguliswa, kukhona abanye. Ngokwesibonelo, kukhona ukulunywa eqinile kakhulu endaweni bendunu le zamehlo. Sithanda njalo ukunwaya lezi zindawo. Cishe ngokuphazima kweso emehlweni uqale ukulimaza, kukhona isifiso ubavalele phansi. Zidinga ebumnyameni, futhi ukukhanya kubangela kabi. isimo sogulayo edema ababuthakathaka, nakuba buhlungu wazizwa. Uma ukuvuvukala umgudu wokuphefumula, kubonakala emoyeni ukuthi akwanele ukukhanya. Ngokuvamile kubonakala in iziguli ubuchopho inkungu, abakwazi zikubeka ngokucacile lokho ncamashi uzizwe. Kunoma yikuphi, uma usola ukuthi iqala angioedema, izimpawu zibonisa ngokucacile ukuthi ukusabela iguliswa, ngokushesha shayela i-ambulense.
Usizo lokuqala for ukuvuvukala iguliswa
Uma angioedema waqala ngaphandle ambulense ongakwazi ukuzenza. Ngaphambi kokufika odokotela kufanele babe nesineke ukuthatha antihistamine. Kubalulekile futhi ukuba njalo baphuze amanzi amaningi kanye ukuthatha isisu ngokulinganisa. Futhi khumbula ukuthi ngeke ukwazi lokukwenqaba yezokwelapha esibhedlela nge angioedema.